Huawei Hits Back at FCC With Legal Challenge
Raymond Zhong (New York Times) SHENZHEN, China Huawei, the Chinese technology powerhouse, is challenging the Federal Communications Commission in court for choking off its sales in the United States, the latest in the besieged company’s widening efforts to hit back at regulators and critics across the globe. The FCC voted last month...
MELBOURNE Australia's minerals agency has signedadeal with its United States counterpart to jointly developabetter understanding of both countries' critical minerals reserves, Australia said on Tuesday. GeoScience Australia and the United States Geological Survey (USGS) signed the agreement, which did not mention any specific funding, that will also...
Being able to hold your breath for 10 seconds or more without coughing or feeling discomfort DOES NOT mean you are free from the COVID-19 or any other lung...
Being able to hold your breath for 10 seconds or more without coughing or feeling discomfort DOES NOT mean you are free from the coronavirus disease (COVID-19) or any other lung disease. The most common symptoms of COVID-19 are dry cough, tiredness and fever. Some people may develop more severe...
တရုတ်နိုင်ငံမှ နှာခေါင်းစည်း ဝယ်ယူခွင့်ရရေး နိုင်ငံအချင်းချင်း အချင်းများနေရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အခရာကျမည့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခွင့်ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံအသီးသီး၏ အဝယ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် အချင်းများကာ ဝယ်ယူခွင့် ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေကြရကြောင်း ဂျာမနီနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Jens Spahn က ပြောသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကာကွယ်ရေးနှာခေါင်းစည်းများကို အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက ဝယ်သွားသည်ဆိုသည် သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ "တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဒီနှာခေါင်းစည်းတွေဝယ်ယူခွင့်ရဖို့ လူတွေ တကယ်ကြီး စကားများ၊ ရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားတယ်မဟုတ်လား" ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရင်း၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ "ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဝယ်လိုအားတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြနေတယ်" ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် အသွားအလာကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ထားသလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နှင့် ပတ်သက်သော စမ်းသပ်မှုများလည်း ပြုလုပ်နေရာ...
Tesla Reports Record Output as Musk Delivers on Broader Goal
Niraj Chokshi(The New York Times) Tesla said January3that it had produced over 100,000 vehicles and delivered even more in the fourth quarter of 2019, meetingagoal it had laid out to investors and ending the year on stronger footing than at the start. Inastatement, the electric-vehicle...